Maxaad Kala Socotaa Sawirka Sababay In Xilka Laga Tuuro Hogaamiye Kalidii Taliye Ah? | Kaafi News
Sannadkii 1987, wiil dhalinyaro ah oo mudaaharaadayey isagoo halku dhigyo dimoqraadiyad doon ah lagu xardhay jidhkiisa ayay booliska ku dileen magaalada Dhaka, Bangladesh. Maydkiisa ayaa lagu tuuray jeelka booliska, laakiin sawir isaga laga qaaday ayaa gacan ka gaysatay dhiirigelinta kacdoon lagu riday kaligii taliyihii dalkaasi xukumayay. Weriyaha BBC-da Moazzem Hossain, oo maalintaasi ku jiray qolka wiilka la toogtay, ayaa waxa uu raadiyay sheekada sawir laga qaaday wiilka.
Toddobaadkii ka horreeyay 10-kii Noofambar 1987, magaalada Dhaka way kacsanayd. Madaxweyne Xuseen Maxamed Irshaad wuxuu caasimada Bangaladheesh ee Dhakaar ka jaray waddanka intiisa kale, wuxuu jaray gabi ahaanba xiriirkii isgaarsiinta. Iskuuladii, kuliyadihii, iyo jaamacadihii waa la xiray ardayduna waxaa lagu amray inay ka baxaan hoygii goobaha waxbarashada . Dibadbaxyada siyaasadeed iyo isu soo baxyada waa la mamnuucay, Irshaad, oo ahaa kaligii taliye militari, wuxuu adeegsanayay awoodda xaaladda degdega ah si uu u xirxiro boqolaal ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda.
Laakiin xoogagga siyaasadeed ee mucaaradka ayaa abaabulayay kumanaan taageerayaashooda ah si ay ugu cadaadiyaan iscasilaadda madaxweynaha. Subaxnimadii 10-kii Noofambar, waxaan ka mid ahaa kumaan kun oo hawl-wadeenno ah oo u socday ka qeyb galka dibad-baxyada. balse weligeen inooma aysan suurogelin. Abbaarihii 9-kii subaxnimo, aniga iyo dhowr kale oo mudaaharaadayaal ah waxaa na soo qaaday booliska rabshadaha ka hortaga. Waxaa noola garaacay si arxan darro ah, waxaa nalagu guray gaari xamuul ah waxaana nala geeyay saldhigga booliska.
Waxaa sii socday ugaarsiga dibadbaxayaasha, waxaana xabsiga la keenay maxaabiis siyaasadeed oo badan. Waxay dagaallo ka socdeen dhammaan magaalada Dhaka. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha la keenay waxaa ku yaallay dhaawacyo loo adeegsaday rasaas nool. Dadka dhawaca ahaa ayaa waxaa ka dhex istaagay nin dhalinyaro ah oo feera qaawan – Waxaana laabtiisa qaawan ku xardhanaa halheys. Erayadana waxaa ka mid ahaa ‘nin maqaar cad oo bilaa naxriis ah ayaa na gubay.’
XIGASHADA SAWIRKA,PAVEL RAHMAN
Qoraalka sawirka,Sawirqaade Pavel Rahman wuxuu sheegay in uu wadnaha hurey markii uu arkay waxa ku qoran dhabarka Nuur.
Qofkaasi waxaa uu ahaa nin la yiraahdo Nuur Xuseen. Ma garanaynin cidda uu markaas ahaa. Ma ogeyn in goobta lagu toogtay lagu magacaabi doono isaga. Ma aanan ogeyn inuu caan noqdon doono – dedaalkiisa ​​wuxuu ku soo uruursaday in buugaag filim, gabayo iyo sawirro boorarka lagu dhejiyo. Ma ogeyn in sawir isaga laga qaaday daqiiqado ka hor inta uusan dhiman ay astaan ​​u noqon doonto halgankeena dheer ee dhiiga badan uu ku daatay kaasi oo lagu doonayay dimuqraadiyadda.
Waxaan fiiriyay sawirrada Nuur Xuseen marar badan 33 sano ee lasoo dhaafay. Dhiiragelin ayaa ka muuqata. jirkiisa ay dhalinyaranimada ka muuqato iyo halkudhegyada lagu xardhay, waxay umuuqdaan inay ifinayaan illeyska qorraxda.
Maalin kadib markii uu dhintay Nuur Xuseen, oo 26 jir ahaa, sawirradiisa ayaa ka muuqday bogagga hore ee wargeysyada Bangladesh, kuwaasi oo naxdin gelinaya dawladda isla markaana dhiirrigelinaya malaayiin. Dibadbaxyadii isaga iyo aniga aan ku lug laheyn 1987-dii si xoog ah ayaa loo dhigay, laakiin seddex sano ka dib dhaqdhaqaaq kale oo mudaaharaad ah ayaa ku guuleystey in xukunka laga tuuro Madaxweyne Irshaad, qaar badan oo ka mid ah mudaharaadayaashaasna waxaa dhiiri galiyay sawirka Nuur Xuseen.
Nuur aabihiis, Mujibur Raxmaan, wuxuu ahaa darawal waqtigaasi ka shaqeeynayay Dhaka. Mujibur wuxuu dhintay 15 sano kahor, laakiin waxaa ii suurogashay inaan baadi goobo Nuur walaalkiis Cali. Weli wuxuu si aad ah u xasuustaa maalmihii ugu dambeeyay ee Nuur.
“Aabbahay wuu ogaa in Nuur uu ku lug lahaa siyaasadda – in badan ayuu ka maqnaan jiray gurigiisa wuxuuna ka qayb qaadan jiray isu soo baxyada siyaasadeed,” ayuu yiri Cali.
Qoraalka sawirka,Cali Xuseen
Kadib markii uu Nuur ku guuldareystay inuu gurigiisa ku laabto laba habeen oo isku xigta, waalidkiis waa ay walwaleen. Subaxnimadii 10kii Noofambar 1987, waxay ka heleen masaajid ku yaal magaalada.
“Waalidkey waxay ka codsadeen inuu ku soo laabto guriga, laakiin waa uu ka diiday. Wuxuuna ku qanciyay inuu goor dambe imaan doono,” ayuu yiri Cali. “Taasi waxay ahayd markii ugu dambeysay ee waalidkay arkeen.”
Gelinkii dambe ee maalintaas, Nuur wuxuu ku biiray safka mudaharaadayaasha. Banaanbaxa ayaa isku badalay mid rabshado wata, iyadoo banaanbaxayaashu ay booliska dhagxaan ku tuurayeen halka booliskana ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa, ugu dambeyntiina rasaasta nool ay ku ridayeen banaanbaxayaasha. Saddex qof, oo uu ku jiro Cali Xuseen , ayaa si ba’an loo toogtay, daraasiin kale ayaa dhaawacmay.
Majiraan saraakiil waligood lagu soo oogay dilka Nuur. Majiro wax sarkaal ah oo dacwad lagu soo oogay intii uu Janaraal Irshaad xukunka hayay, in kasta oo boqolaal mudaharaadayaal ah ay dileen booliska.
XIGASHADA SAWIRKA,SHAHIDUL ALAM
Qoraalka sawirka,Police opened fire at stone-throwing protesters during the demonstration in 1987
Pavel Raxmaan oo ah sawir qaade ayaa ii sheegay inuu Nuur Xuseen ka arkay dhabarka oo keliya, wuxuu muddo nus qarni ah ka hawl galayay Jaraa’idka Rahman.
Waxa uu sheegay inuusan weligii markaasi ka hore arkin qof dibadbaxaya oo jirkiisa ku xardhan yahay midab cad. Kadib markii u arkay sawirka Nuur Xuseen oo ay ku xardhan yihiin hal ku dhigyo ayaa waxa uu yiri waxaa i dhaq-dhaqaaqay wadnaha.
Laakin isla galabkaasi Pavel Raxmaan oo ku hawlan inuu daabaco sawirka wiilka ayaa saaxibkii u sheegay inuu geeriyooday wiilkii dhalinyarada ahaa ee uu jirkiisa ku xardhanaa rinjiga cad.
Waxaa la isku qabsaday in la daabaco iyo la iska daayo, balse ugu dambeyn waa la daabacay.
Qoraalka sawirka,Nuur Xuseen ayaa ka muuqda sawirkan qeybta hoose oo dadka badan ku dhex jira wax yar ka hor intii aanan la tooganin.
Hase yeeshee sawirka Pavel ayaa aad waddanka ugu baahay, laakin ma jirin cid ogaan lahayd wajiga nuur haddii uusan ahaan lahayn sawir qaade kale oo lagu magacaabo Dinu Alam oo sawiray wajiga nuur.
Kadibna labadaas sawir ayaa horseedday dibadbaxaydii looga taqalusay dowladdii uu hogaaminayay Xuseen Maxamed Irshaad.
Ikraam Xuseen waxaa uu ahaa wiilkii qoraalka ku xardhay jirka Nuur waxa uuna ka shalaayay qoraalkaasi isagoo sheegay haddii usan ku qori lahayn jirkiisa aysan waxaani saaxibkii ku dhici lahayn.
Qoraalka sawirka,Xaruntii booliska ee lagu tuuray Nuur
Mujibur iyo xaaskiisa Maryan Bibi ayaa markii dambe waxay ogaadeen in wiilkooda Nuur ay booliska si qarsoodi ah ugu aaseen qabuuraha Dhaka, laakin wax calaamad ah uma aysan yeelin, waxaana ku adkaatay iney gartaan qabriga wiilkooda.
Qoraalka sawirka,Sawirka nuur oo lagu xardhay Jaamacadda Dhaka 1990-kii.
Waxaan la kulmay General Irshad hal mar, in ka badan toban sano kadib markii uu dhintay Nuur. Waxay ahayd 1999 Irshaad, oo markaa ahaa siyaasi mucaarad ah, wuxuu socdaal iyo safar ku marayay dalka si uu u cusboonaysiiyo taageeradiisa. Waxaan ku weheliyey safarka webiga ee koonfurta Bangladesh. Mid ka mid ah kaaliyeyaashiisa ayaa u sheegay in aan ahaa qof u ololeeya xagjirnimada intii aan ardayga ahaa ayna booliska i xireen.
“Waxaan maqlay inaa tahay isbadal doon ,” ayuu si kaftan ii yiri xilli aanu quraacanaynay.
Qoraalka sawirka,General Irshaad waxa uu awoodda dalkaasi kula wareegay afgambi 1982-dii.
Janaraalka oo geeriyooday sannadkii la soo dhaafay ayaa waxa uu ahaa qof deggan oo shakhsiyad wanaagsan balse waxa uu lahaa wajiyo badan. Waxaa uu talada dalka kula wareegay afgembi milatari oo uusan dhiig ku daadan 1982-dii
Doorashadiisii 1986-dii ayaa waxa lagu eedeeyay iney jirtay wax isdaba marin, waxayna taas horseedday inuu meesha ka saaro sharcigii dalka, sidoo kalana cagta mariyo siyaasiyiinta isaga ka soo horjeeday.
Kadibna waxaa bilowday kacdoonadii ka dhanka ahaa Ershaad 1987-dii, waxayna horseedday in aniga xabsiga la ii taxaabo Nuur-na uu noloshiisa ku waayo.
Qoraalka sawirka,People cheering on a the back of a vehicle in Dhaka after the success of the 1990 uprising
Xukunkii Irshaad ee 9-ka sano socday ayaa waxa uu dhamaaday 1990-kii, ka dib markii lagu qasbay inuu xilka iska casilo. Maalmo kadibna waa la xiray. Dadweyne aad u farabadan ayaa isku soo baxay kuwaasi oo ku faraxsan iscasilaadda maaxweyne Irshaad. Maalintaas waxaan dareemay inuu waa’ cusub inoo baryay. Bangladhesh cusub ayaa ii sawirantay balse taasi waxay ahayd muddo gaaban oo waxaa bilaabatay hardankii labada xisbi siyaasadeed ee ugu weyn dalka, waxayna u muuqdeen ku isticmaalaya taatikadii rijiimkii hore.
Qoraalka sawirka,After Ershad fell, the spot where Noor Hossain was killed was renamed Noor Hossain Square